Ezigbo egwuregwu na -ewebata New MultiPlay Live Blackjack
E bipụtara na September 17, 2021
Mbido > Akụkọ & Edemede > Ezigbo egwuregwu na -ewebata New MultiPlay Live Blackjack
Ezigbo Ịgba Cha Cha bụ onye na-eweta nke ọma live casino egwuregwu, ọkachasị lekwasịrị anya na roulette. Mgbe ha nwesịrị ụdị egwuregwu a na -ewu ewu, ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela inye ndị egwuregwu ya a blackjack egwuregwu. Ihe si na ya pụta bụ ahụmịhe ndụ jupụtara n'omume jupụtara na atụmatụ na-atọ ụtọ.
Egwuregwu a sitere na studio ha na Malta, egwuregwu akpọrọ MultiPlay Live Blackjack a na -eji deki asatọ, nke ọ bụla n'ime ha nwere kaadị iri ise na abụọ. Fans nke live casino egwuregwu nwere ike na -atụ anya ọtụtụ nzọ dị n'akụkụ a na -enye, yana setịpụrụ ezigbo RTP egwuregwu ahụ na 99.29%
Ozugbo egwuregwu amalite, ọ bụ oge itinye nzọ. Ezigbo Egwuregwu na -eweta nhọrọ pụrụ iche ebe a, na -enye ndị egwuregwu ohere ịkụ nzọ n'akụkụ na -enweghị isi nzọ. Iji kpọọ osisi, họrọ ọnụ ahịa mkpụrụ ego na ebe ma ọ bụ nzọ ọ bụla ma ọ bụ akụkụ. Kpachara anya, dịka ndị na -akwụ ụgwọ ga -emerịrị tupu ngụ oge ahụ agwụ.
Oge erugo ị malite ịse. Onye kpọrọ oriri na -adọkpụ kaadị ndị ahụ wee tinye ya na tebụl. Ma onye ọkpụkpọ ma onye na -ere ahịa na -enweta kaadị abụọ. A ga-edobe otu n'ime kaadị ndị na-ere ahịa iji mee ka ndị egwuregwu nwee ike ịhazi ọpụpụ ọzọ ha. Nhọrọ dịnụ ga -akụ aka, guzoro, jiri okpukpu abụọ ma ọ bụ kewaa aka, ma ọ bụrụhaala na emezuru ọnọdụ niile. Ndị na -egwu egwu nwere ike ịnweta kaadị ndị ọzọ dabere na nhọrọ ha.
Mgbe onye ọkpụkpọ ahụ mere nhọrọ ya, onye na -ere ahịa ga -ekpughere kaadị nke abụọ. Enwere ike ịse kaadị ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ebumnuche maka ha abụọ bụ inweta 21. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ nweghị onye n'ime ha nwetara 21, onye kacha nso na uru a ga -emeri agba. Ịgafe 21 na -ebute oke na mfu nke agba. Ọ bụrụ na ndị egwuregwu na ndị na -ere ahịa nwere otu nchikota, agba a ga -ejedebe na ntanye.
Dịka anyị kwurula, MultiPlay Live Blackjack na -abịa n'ọtụtụ nhọrọ nke nzọ n'akụkụ. Ndị kachasị mfe bụ ndị egwuregwu na ụzọ abụọ na -ere ahịa. A na -enye ihe nrite ma ọ bụrụ na kaadị abụọ adọtara abụọ bụ ụzọ abụọ, ha na -enyekwa ihe nrite naanị maka ụzọ abụọ ha.
Irs Ngwakọta agwakọta na -enye ụgwọ ruru ọnụ ahịa ya ugboro isii
Pa Akara abụọ nwere agba na -akwụ mmadụ iri na abụọ otu
Pair Di na nwunye zuru oke na -akwụ okpukpu iri abụọ na ise
Nzọ akụkụ 21+3 na -akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na kaadị abụọ mbụ nke onye ọkpụkpọ na kaadị nke onye na -ere ahịa na -etolite a poker aka. Nke a bụ ihe onyinye a na -enye:
Lus Kwụpụ kwụọ otu ise ụgwọ
● Onyinye kwụ ọtọ na -enye ihe nrite ugboro iri
Lus Ụkwụ kwụ ọtọ na -akwụ iri anọ na otu
Ụdị ụdị atọ na-enyefe otu narị ego
Ezigbo egwuregwu emechaala gbanwee ụkpụrụ ahụ wee mepụta onye na -ere ahịa mbụ ya Blackjack game.
Dị ka aha ya na -egosi, iji merie nzọ ahịa Dealer Busts, onye na -ere ahịa kwesịrị ịgba mbọ wee daa. Ọnụ ọgụgụ kaadị na -ekpebi nha ịkwụ ụgwọ:
● Iji kaadị atọ ma ọ bụ anọ na -agbaji ga -akwụ mmadụ abụọ ụgwọ otu ego
● Iji kaadị ise na -enye onyinye ihe nrite okpukpu anọ
● Iji kaadị isii eme njem na -akwụ mmadụ iri na asatọ ụgwọ otu
● Iji kaadị asaa eme ihe na -akwụ iri ise na otu
Iji kaadị asatọ na -enye onyinye nkwụghachi ụgwọ mmesapụ aka, ọnụ ahịa ya ruru okpukpu abụọ nke osisi
Top 3 bụ nzọ dị n'akụkụ yiri 21+3, ebe ọ na-emepụta ngwakọta mmeri site na iji kaadị abụọ mbụ nke onye ọkpụkpọ na kaadị ihu onye na-ere ahịa.
● Ụkwụ kwụ ọtọ na -akwụ 25 n'otu
● Atọ-ụdị na-enye ụgwọ ruru 100 nzọ nzọ
Lucky Lucky na -enye ndị egwuregwu ihe nrịba maka ọdịda ọdịda site na iji kaadị abụọ mbụ ha na kaadị nke onye na -ere ahịa. Kachasị ụgwọ dịnụ maka nzọ akụkụ a kwesịrị ugboro 200 nke osisi.
Ladies Lucky na -akwụ ụgwọ mgbe ọ bụla kaadị abụọ mbụ mepụtara njikọta mmeri. Ngwakọta ruru eru bụ otu ụzọ Queen of Hearts na kaadị nke ọnụ ahịa ha dị iri abụọ. N'okwu kachasị mma, ịkwụ ụgwọ a na -akwụ 100 otu.
Enwere otu ihe dị mkpa ị ga -eburu n'uche mgbe ị na -egwu MultiPlay Live Blackjack nzọ dị n'akụkụ. Nke ahụ bụ RTP dị ala ha na -abịa. N'aka nke ọzọ, isi nzọ nwere pasent ịkwụ ụgwọ nke 99.29%, na -eme ha nhọrọ nchekwa maka ndị egwuregwu. Mmeri ọkọlọtọ ọ bụla na -akwụ otu otu, mgbe Blackjack na -akwụ atọ ruo abụọ. Cheta, ị ga -enwerịrị 21 dị ka nchikota nke kaadị abụọ mbụ gị iji tụọ akara blackjack merie.
Ezigbo egwuregwu agbakwunyere egwuregwu ọzọ na -atọ ụtọ, nke ahụ bụ atụmatụ akpaaka akpaaka. Ọ bụrụ na ndị egwuregwu emeghị mkpebi n'oge, egwuregwu n'onwe ya ga -ahọrọ mmegharị kacha mma. Otu ihe ahụ ga -eme ma ọ bụrụ na ị kwụpụ n'oge egwuregwu.
MultiPlay Live Blackjack bụ mwepụta mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ na mpụga nke ndụ roulette, anyị ga -asịkwa na ha emeela ọmarịcha ọrụ. Egwuregwu ahụ kwụ ọtọ ma na -enye kpọmkwem ihe blackjack ndị egwuregwu na -achọ. Ọtụtụ nzọ dị n'akụkụ na -agbakwụnye na mkpali, ebe ndị chọrọ ọdịnala blackjack ahụmịhe nwere ike irite uru site na RTP dị elu nke isi ihe na -enye. Ọ dịịrị ndị egwuregwu ịhọrọ mgbanwe nke ahụmịhe ha, nke ahụ bụ ihe onye ọ bụla na -akwado egwuregwu ndị na -ere ahịa ga -enwe ekele maka nleta Ntaneti Online taa ịhụ ihe na -akpali akpali karị live casino utu aha.
N'ebe a ị nwere ike igwu egwu MultiPlay Blackjack